ब्रेकिङ्ग प्रेमिकासँगै नहरमाहामफालेका सैनिक जवान मृत भेटिए, जिवितै उद्दार गरेकी प्रेकिकाले दिइन बयान ! – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/ब्रेकिङ्ग प्रेमिकासँगै नहरमाहामफालेका सैनिक जवान मृत भेटिए, जिवितै उद्दार गरेकी प्रेकिकाले दिइन बयान !
ब्रेकिङ्ग प्रेमिकासँगै नहरमाहामफालेका सैनिक जवान मृत भेटिए, जिवितै उद्दार गरेकी प्रेकिकाले दिइन बयान !
ताजा समाचार काठमाडौं उपत्यकामा आज रातीदेखि हुने निषेधाज्ञालाई थप कडाई गरिने, तर यि बैँकहरु भने खुल्ने !
भर्खरै पशुपतिमा हेर्नुहोस्, यस्तो माग राख्दै घेराउ, ड’रलाग्दो ल’फडा, सयौँ प्रहरी खटायो Pashupati